Isikhathi se-Ordovician: izici, i-geology, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esinye sezikhathi zenkathi yePaleozoic esasibonakala ikakhulu ngokukhuphuka kwamazinga olwandle nokwanda kwempilo ezindaweni zasolwandle yisona Isikhathi se-Ordovician. Kuyisikhathi esitholakala ngokushesha ngemuva kwe- Isikhathi seCambrian nangaphambi kwalokho I-Silurian. Ngalesi sikhathi kube nokuncipha okukhulu kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ekugcineni okwaveza umcimbi wokuqothulwa kwabantu abaningi.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, i-geology, isimo sezulu, izimbali nezilwane zesikhathi se-Ordovician.
2 I-Ordovician Geology
3 Isimo sezulu sesikhathi se-Ordovician
5 Ukuqothulwa kwesisindo se-Ordovician
Lesi sikhathi sithathe cishe iminyaka eyizigidi ezingama-21. Kwaqala cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-485 edlule futhi kwaqhubeka kwaze kwaba cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-433 edlule. Bekunokwehluka okukhulu kwesimo sezulu kwazise kube nomehluko omkhulu phakathi kokuqala kowamanqamu. Ekuqaleni kwenkathi, amazinga okushisa ayephezulu impela, kepha kwakwenzeka uguquko oluningi kwezemvelo olwaholela esikhathini seqhwa.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, kube nokuqothulwa okukhulu ekupheleni kwesikhathi esiphele ngaso cishe ama-85% azo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo ezazikhona ngaleso sikhathi, ikakhulukazi imvelo yasolwandle.
Le nkathi ihlukaniswe izikhathi ezintathu: Ophansi, Ophakathi kanye no-Upper Ordovician.
Esinye sezici ezibalulekile maqondana nokwakheka komhlaba kwalesi sikhathi ukuthi amazinga olwandle ayephakeme kunawo wonke ake aba khona. Sonke lesi sikhathi kwakukhona ama-supercontinents amane: IGondwana, iSiberia, iLaurentia neBaltica. Njengoba kwenzekile esikhathini esedlule, i-hemisphere esenyakatho yeplanethi icishe yathathwa yi-Panthalassa Ocean. Kutholakale kuphela iSiberia yezwekazi elikhulu kanye nengxenye encane yeLaurentia kule nhlonipho.
Izwe eliseningizimu, sinezwekazi laseGondwana elalihlala cishe sonke isikhala. Kwakukhona nengxenye yeBaltica neLaurentia. Izilwandle ezazikhona ngalesi sikhathi zazi: UPaleo Tetis, uPanthalasa, uLapetus noRheico. Kuningi okwaziwayo ngokuma komhlaba kwe-Ordovician kusuka ezinsaleleni zamadwala ezitholakele. Iningi lalezi zinsalela zitholakala emadwaleni asezintabeni.
Esinye sezimo zokwakheka komhlaba ezaziwa kakhulu kulesi sikhathi yi-orogeny yeTaconic.. Le orogeny yakhiqizwa ukungqubuzana kwama-supercontinents amabili. Lokhu kuxhumana kudonse iminyaka eyizigidi eziyi-10. Njengomphumela wale nqubo yokwakheka komhlaba, i Izintaba ze-Appalachian.
Isimo sezulu sesikhathi se-Ordovician
Njengoba sishilo ngaphambili, isimo sezulu senkathi yama-Ordovician sasifudumele futhi sishisa kakhulu. Ikakhulukazi ekuqaleni kwenkathi kwakukhona amazinga okushisa aphezulu, ngisho nezinkomba zokuthi kunezindawo ezinamarekhodi okushisa kwamazinga angama-60 degrees. Kodwa-ke, ekupheleni kwesikhathi, amazinga okushisa aqala ukwehla ngendlela yokuthi kwaholela ekutheni kuqhume i-glaci ebalulekile. Le glaciation ihlasele ikakhulukazi izwekazi laseGondwana. Ngalesi sikhathi i-super continent kwakuyizwekazi eliseningizimu yeplanethi. I-glaciation yathatha cishe iminyaka eyizigidi eziyi-1.5. Ngenxa yale nqubo yokwehla kwamazinga okushisa, inani elikhulu lezinhlobo zezilwane ebelingakwazi ukuzivumelanisa nezimo ezintsha zemvelo lanyamalala.
Kukhona ezinye izifundo eziqinisekisa ukuthi i-glaciation yaze yanabela nasenhlonhlweni ye-Iberia. Lokhu kusho ukuthi inkolelo yokuthi iqhwa lisakazeka kuphela ezindaweni eziseningizimu izophikiswa. Izimbangela zalesi glaciation namanje azikaziwa. Kukhona ukukhuluma ngokuncipha kokugxila kwe-carbon dioxide njengesizathu esingaba khona.
Ngesikhathi se-Ordovician kwavela inqwaba yesizukulwane ezaveza izinhlobo ezintsha. Ikakhulukazi impilo yasolwandle yathuthuka. Sizohlaziya izimbali nezilwane ngokwehlukana.
Ngokubheka ukuthi iningi lempilo lithuthukile endaweni yasolwandle, kunengqondo ukucabanga ukuthi izitshalo zikhule kangcono. Ulwelwe oluhlaza lwanda olwandle. Izinhlobo ezithile zesikhunta nazo zazikhona ezagcwalisa umsebenzi wokubola nokuhlakazeka kwezinto eziphilayo ezifile. Le yindlela ulwandle olwalungalawula ngayo.
Umlando wokuthola izinhlelo zasemhlabeni bewuhlukile kulowo wasolwandle. Futhi ukuthi izimbali bezicishe zingabikho. Kwakunezitshalo ezimbalwa kuphela ezincane ezaqala ukoloni nezwekazi. Lezi zitshalo bezingezakudala futhi ziyisisekelo. Njengoba bekulindelekile, zazingezona izitshalo zemithambo, okungukuthi, babengenayo i-xylem noma i-phloem. Njengoba zazingezona izitshalo zemithambo yegazi, kwakudingeka ukuhlala eduze nezifundo zamanzi ukuze zikwazi ukuthola ukutholakala okuhle. Lezi zinhlobo zezitshalo zifana nama-liverworts esiwaziyo namuhla.
Ngesikhathi se-Ordovician izilwane zaziziningi kakhulu olwandle. Kwakukhona ukuhlukahluka kwemvelo okukhulu kakhulu kusuka kokuncane kakhulu futhi kwakudala kakhulu kuya kwezinye izilwane eziguquke kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi.
Saqala ukwenza ama-arthropods. Ingenye ye-phyla eningi kakhulu kulesi sikhathi. Ngaphakathi kwama-arthropods sithola ama-trilobites, ofezela basolwandle nama-brachiopods, phakathi kwabanye. AmaMollusks nawo akhuliswa kakhulu ngokuziphendukela kwemvelo. Ama-Cephalopods, ama-bivalves nama-gastropods atholakala kakhulu ezilwandle. Lezi zokugcina zazidinga ukuya ngasogwini lolwandle, kepha njengoba zazingenakho ukuphefumula kwamaphaphu, zazingakwazi ukuhlala endaweni yasemhlabeni.
Ngokuqondene namakhorali, aqala ukuqoqwa ndawonye izixhobo zamakhorali zokuqala futhi zaziqukethe izinhlobo ezahlukahlukene. Futhi babenezinhlobonhlobo zezipanji ezazivele zihluka ngesikhathi seCambrian.
Ukuqothulwa kwesisindo se-Ordovician
Lokhu kucishwa kwesisindo kwenzeka cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-444 edlule futhi kuthinta ukuphela kwesikhathi se-Ordovician nokuqala kwesikhathi seSilurian. Izimbangela ezenza ososayensi babheje yilezi ezilandelayo:
Nciphisa i-carbon dioxide esemkhathini. Lokhu kudale ukuqabuleka komhlaba okunciphise inani lezilwane nezitshalo.
Ukuqhuma kwe-supernova. Le mbono yathuthukiswa eminyakeni eyishumi yokuqala yekhulu lama-XNUMX. Uthi kube nokuqhuma esikhaleni okuvela enkathini enkulu edale umhlaba okhukhuliswe yimisebe ye-gamma. Le misebe ye-gamma ibangele ukuba buthaka kongqimba lwe-ozone nokulahleka ezinhlotsheni zokuphila zasogwini lapho kunokujula okuncane.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nesikhathi se-Ordovician.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isikhathi se-Ordovician
UJavier Manrique kusho
Ngicabanga ukuthi ngokuphambene nalokho, ukuminyana okuphezulu kwe-CO2 emkhathini kubangela umphumela wokushisa okushisayo, obhekene nokuguquka kwesimo sezulu okungenzeka kuphele ku-Ordovician Period. Kulolu cwaningo bathi okuphambene nalokho, ukuthi lesi sikhathi sidalwe ukugxila okuphansi kwe-CO2. Yize i-CO2 isetshenziswa ezindlini zokugcina izithombo ukwenza ngcono ukukhula kwezitshalo, angingabazi ukuthi ukwehla kulokhu kuzodala iminyaka yeqhwa. Ucabangani?
Phendula uJavier Manrique